बढ्यो सुनको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? – Suchana Hub
बढ्यो सुनको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । बुधबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । आज सुनमा प्रति तोला ४ सय रुपैयाँले बाढेको छ ।
यससँगै शुक्रबार प्रति तोला ९४ हजार ५ सयमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ आज प्रति तोला ९४ हजार ९ सय कायम गरिएको छ भने शुक्रबार ९४ हजार रुपैयाँ प्रति तोलामा कारोबार भएको तेजावी सुनको मूल्य आज ९४ हजार ४ सय निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आज चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको छ । चाँदीको मुल्य आज प्रति तोला १ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको महासंघले जनाएको छ ।
Previous अब एकल पुरुषलाई पनि भत्ता